Web Design Tutorials Archives - Page2of4- နည်းပညာ
Web Design Tutorials ကဏ္ဍ
jQuery form သင်ခန်းစာ – jQuery form validation tutorial
jQuery Tutorials, Web Design TutorialsMyoWin
အရင်ဆုံး အရင်သင်ခန်းစာ နှစ်ခုအပါအဝင် ဒီနေ့ သင်ခန်းစာ ပြီးရင် ရရှိမယ့်ပုံကို ပြပေးချင်ပါတယ်။ Demo မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကွက်လပ်တွေမှာ ဘာမှမဖြည့်ပဲ ကလစ်နှိပ်ကြည့်ပါ။ Form ထဲမှာ မဖြည့်ထားကြောင်း သတိပေးစာ ပေါ်လာပါမယ်။ ဒီနေ့ သင်ခန်းစာပြီးရင် အဲဒါတွေ လုပ်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်သင်ခန်းစာ နှစ်ခုကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
1. Login form tutorial (HTML,CSS, jQuery) part I
2. Login form tutorial (HTML,CSS, jQuery) part II
Login form tutorial (HTML,CSS, jQuery) part II
Web Design TutorialsMyoWin
ဒီသင်ခန်းစာ မဖတ်ခင် ကျွန်တော် အရင်တစ်ခေါက်က ရေးခဲ့တဲ့ Login form tutorial (HTML, CSS, jQuery) Part I ကို ဖတ်ဖူးရပါမယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကတော့ အဲဒီ သင်ခန်းစာရဲ့ အဆက် အပိုင်း ၂ ပါ။ CSS ရေးနည်း သင်ပေးမယ့် သင်ခန်းစာဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့။
CSS ဆိုတာ Cascading Style Sheet ရဲ့ အတိုကောက် ဖြစ်ပါတယ်။ CSS ရေးနည်း သုံးနည်းရှိပါတယ်။
– tag တွေထဲမှာ attribute အနေနဲ့ ဝင်ရေးတဲ့ inline CSS ရေးနည်း။ (ဥပမာ။ ။ <html style=””>)
ဒီ ဥပမာမှာ <html> ဆိုတာက tag ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်သင်ခန်းစာမှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ style=”” ဆိုတာကတော့ attribute လို့ ခေါ်ပါတယ်။
– <head> tag ထဲမှာ ဝင်ရေးတဲ့ embeded CSS ရေးနည်း။ (ဥပမာ။ ။<head>…………</head>)
ဒီ ဥပမာမှာ …………….. တွေနေရာမှာ CSS code တွေ ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Login form tutorial (HTML,CSS, jQuery) part I
ဒီတစ်ခေါက်တော့ form သင်ခန်းစာလေးတွေ series အလိုက် သင်ပေးသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာက web design နဲ့ ဆိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ web design ကို စိတ်မဝင်စားဘူး။ Website တစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်လဲ မသိချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီသင်ခန်းစာက ခင်ဗျားနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ကျော်သွားပါ။ အဲလိုမှမဟုတ်ဘူး website တွေ ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ web design ဆိုတာကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီသင်ခန်းစာက professional web designer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် လုံးဝ အစပါပဲ။ အခုထိ ဖတ်မိနေပြီဆိုတော့ ခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ခန်းစာ ဆက်လေ့လာကြတာပေါ့။
သာမာန် web designer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ html နဲ့ css ကို သိရပါတယ်။ အခု ဒီသင်ခန်းစာမှာ form နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ html ကို သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ css ကို သင်ပေးပါမယ်။ html မသင်ခင် tag ဆိုတာကို သိရပါမယ်။ tag ဆိုတာက ထောင့်ကွင်းအဖွင့် “<” နဲ့ ထောင့်ကွင်းအပိတ် “>” ထဲ ထည့်ရေးထားတာမှန်သမျှကို tag လို့ ခေါ်ပါတယ်။ tag တွေတိုင်းမှာ အဖွင့်နဲ့ အပိတ်ရှိပါတယ်။ အပိတ် tag မှာ slash လို့ခေါ်တဲ့ မျဉ်းစောင်း “/” လေးပါ ပါတယ်။ ဥပမာ <html> ဆိုတာက အဖွင့် tag ဖြစ်ပြီးတော့ </html> က အပိတ် tag ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဒါဆို notepad++ ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ html စရေးဖို့ အရင်ဆုံး ရေးရမယ့် tag တွေက